zoster Pink yisifo esithathelanayo-nomzimba. Uzibonakalisa ngesimo ukuqubuka ngokubomvu emzimbeni. Lesi sifo ubhekwa ezithile zonyaka futhi sithinta abesifazane ngokuvamile amadala. ukubukeka kwakhe neqhaza ushintsho njalo we sezulu kanye imikhuhlane.
zoster Pink livela ngesimo izindawo ezincane. Okokuqala, kukhona endaweni eyodwa, okuthiwa i-plaque umzali. Ngokuhamba kwesikhathi, maphakathi endaweni ethintekile iqala ukuba phuzi udiliza off, bakha usebe ecacile obomvu azungeze. Njengoba isifo siqhubeka kunezinye izindawo, kodwa ubukhulu ezincane. Pink umbandamu kungaba ukuzibonakalisa njengoba uqwembe olulodwa futhi ezinkulu zishaye izindawo ezinkulu zomzimba.
Ukwelashwa nokuvikelwa pink wayencisha umuntu
Njengomthetho, lezi ukuqubuka emzimbeni Ungasingenisi ukuhlushwa. Abakwazi zavele futhi zinyamalale ngokuzumayo nje. Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi akudingekile ukuba aphathe pink ukuphuca umuntu, ikakhulukazi imithi elwa namagciwane. Lesi sifo siphela ngokuzimela phakathi namasonto ambalwa. Kufanele kuqashelwe ukuthi lesi sifo ingaqala kuphela labo bantu babe buthakathaka isimiso sokuzivikela komzimba. Ngakho-ke, ukwelapha pink wayencisha umuntu kumelwe siqale ekuqiniseni amasosha omzimba.
Ngisho ngoba kwelulama ukuncoma ukunikeza ngesikhathi ukugula ngu ukugeza (sebenzisa kuphela eshaweni), futhi musa ukugqoka zokwenziwa zangaphansi (isikhumba kudingeka uphefumule). Futhi kungaba ngempumelelo ukunqoba lesi sifo kusetshenziswa yemvelo amakhambi abantu.
Indlela ephumelela kunazo ukusebenzisa apple cider uviniga. Badinga izikhathi ezimbalwa ngosuku ukusula ezindaweni ezithintekile komzimba. Ukusetshenziswa kukawoyela peach imbewu, uwoyela rosehip ngesivinini yokuthola izikhathi ezimbalwa. Imiphumela Excellent unika uwoyela zokhuni. Ukuze wenze lokhu izikhathi ezimbili noma ezintathu zoster usuku gcoba elicwiliswe uwoyela nge swab ukotini.
Ake sibheke esinye hlobo ulele, othiwa herpes zoster (isithombe ungabona ngezansi). Ngokungafani pink, iletha eziningi ubuhlungu bomzimba isiguli. sebuhlungwini obunzima ezihambisana umuntu kulo ukugula kwazo, futhi ngezinye izikhathi iminyaka eminingana ngemva kokuzalwa yokutakula. Igciwane elibangela lesi sifo, - "esiseduze" igciwane herpes. Ngakho-ke, lesi sifo ubizwa nangokuthi herpes zoster. Igciwane kuthinta nezinzwa ebusweni, ngemuva nasemilenzeni. Esinye isithombe - herpes zoster ngobuso.
Amashingili. Izimpawu kanye nokwelashwa
Lesi sifo iqala enamandla kakhulu ubuhlungu esivuthayo. Ngemva eyodwa kuya kwemithathu izinsuku kule obala endaweni Bubbles avele ketshezi. Base esikhundleni obomvu zibe maholoholo nezimagqabhagqabha bobunjwa okungajwayelekile. Ukwelashwa ezinqunyiwe kuyafana herpes. Ekwelapheni lesi sifo kuthiwa kungase kutholakale amakhambi abantu. Nazi izindlela ezimbalwa.
Gcoba zoster wamafutha izikhathi eziningana phakathi nosuku. Kuvele kwamafutha nangoju nesweli umlotha: amagremu 100 of uju, thatha 20 amagremu garlic umlotha. Ungase futhi ukusula isikhumba nge decoction noma immortelle, uphephamente ngisho usizo licindezele nekufakwa burdock impande.
Kuqinisa amasosha omzimba, futhi ngaso sonke isikhathi enempilo!
Ingcindezi Intraocular. Izimpawu kanye nokwelashwa glaucoma
Viral umphimbo obuhlungu - izimpawu, uphethwe, ukuphathwa
Izimpawu kanye nokwelashwa Landau-Kleffner syndrome
Izifo ezithathelwana ngocansi: Izimpawu kanye Sifo
Ukuziphatha ezingosomathuba izingane futhi ibhizinisi, noma kanjani ukuthengisa indlovu
Yiziphi izinhlobo tile? tile Ceramic: izici, izinhlobo. Kuvuleke tile: izinhlobo nobukhulu. Izinhlobo amathayili
Ukwenza ikhekhe ushizi nge semolina ekhaya
Dream Ukuhunyushwa: ithanga. ukutolika abahlukahlukene kuye ngokuthi isimo
"737": okungcono wesifunda ingaphakathi (400 th) zabantu abasesigabeni esiphakathi imodeli
Indlela ugcwalise ividiyo ku "Youtube". Amacebo eziwusizo
Umsebenzi zokulawula isimo, umthetho nenkolo yaseMesophothamiya. kwamazinga zokulawula